ओलीलाई नेपालको प्रश्न : सरकार र पार्टी सञ्चालनबारे सल्लाह गर्नु पर्दैन ? - ओलीलाई नेपालको प्रश्न : सरकार र पार्टी सञ्चालनबारे सल्लाह गर्नु पर्दैन ?
२०७५, ११ चैत्र, 09:26:48 PM
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘नेकपा’ का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीमा व्यक्ति विशेष हावी हुन नसक्ने बताएका छन् ।
‘नेकपा जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त र सामूहिक नेतृत्वको आधारमा चल्ने पार्टी हो जहाँ व्यक्तिविशेष सर्वेसर्वा हुँदैन,’ पत्रकार भेटघाटमा नेकपा सचिवालय सदस्यसमेत रहेका नेपालले भने ।
उनले सरकारलाई विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्न सल्लाह दिए । सरकार र पार्टी सञ्चालनबारे सचिवालयमा सरसल्लाह हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
‘असन्तुष्ट पक्षलाई बोलाई छलफल गरेर विश्वासमा लिनुपर्दछ,’ उनले भने । नेता नेपालले कुनै विषयमा आलोचना भएमा वा केही प्रष्ट गर्नुपर्ने भएमा त्यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने र नेतृत्व फराकिलो हुनुपर्ने बताए।
पार्टीका तल्ला कमिटी र जनवर्गीय सङ्गठनको एकता अर्का पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अमेरिकाबाट फर्किएपछि छलफल गरेर टुङ्गो लगाइने उनले जानकारी दिए ।
नेता नेपालले राज्य निरीह संस्था नभएकाले यसलाई कसैले चुनौती दिन्छ भने चूप लागेर बस्न नमिल्नेसमेत बताए । उनले भने ‘राज्य निरीह संस्था होइन, राज्यलाई कसैले चुनौती दिन्छ भने चूप लागेर बस्ने कुरा हुँदैन ।’
यद्यपी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा आफूले पत्रपत्रिकाबाट मात्र थाहा पाएको उनले बताए । डा। सिके राउतको समूहलाई विखण्डनको बाटोबाट मूलधारमा ल्याउनु राम्रो भएको उनले बताए ।